Safecoin စျေး - အွန်လိုင်း SFE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Safecoin (SFE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Safecoin (SFE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Safecoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Safecoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Safecoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SafecoinSFE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00003SafecoinSFE သို့ ယူရိုEUR€0.00002SafecoinSFE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00002SafecoinSFE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00003SafecoinSFE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000251SafecoinSFE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000177SafecoinSFE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000622SafecoinSFE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000105SafecoinSFE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00004SafecoinSFE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00004SafecoinSFE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000621SafecoinSFE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000219SafecoinSFE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000153SafecoinSFE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00211SafecoinSFE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00477SafecoinSFE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00004SafecoinSFE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00004SafecoinSFE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.000879SafecoinSFE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000196SafecoinSFE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.00301SafecoinSFE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0335SafecoinSFE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0109SafecoinSFE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00206SafecoinSFE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000772
SafecoinSFE သို့ BitcoinBTC0.000000002 SafecoinSFE သို့ EthereumETH0.00000007 SafecoinSFE သို့ LitecoinLTC0.0000005 SafecoinSFE သို့ DigitalCashDASH0.0000003 SafecoinSFE သို့ MoneroXMR0.0000003 SafecoinSFE သို့ NxtNXT0.0022 SafecoinSFE သို့ Ethereum ClassicETC0.000004 SafecoinSFE သို့ DogecoinDOGE0.00815 SafecoinSFE သို့ ZCashZEC0.0000003 SafecoinSFE သို့ BitsharesBTS0.00087 SafecoinSFE သို့ DigiByteDGB0.000903 SafecoinSFE သို့ RippleXRP0.0001 SafecoinSFE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000001 SafecoinSFE သို့ PeerCoinPPC0.00009 SafecoinSFE သို့ CraigsCoinCRAIG0.0129 SafecoinSFE သို့ BitstakeXBS0.0012 SafecoinSFE သို့ PayCoinXPY0.000493 SafecoinSFE သို့ ProsperCoinPRC0.00354 SafecoinSFE သို့ YbCoinYBC0.00000002 SafecoinSFE သို့ DarkKushDANK0.00906 SafecoinSFE သို့ GiveCoinGIVE0.0611 SafecoinSFE သို့ KoboCoinKOBO0.00643 SafecoinSFE သို့ DarkTokenDT0.00003 SafecoinSFE သို့ CETUS CoinCETI0.0815